နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: June 2008
ကိုယ့်လက်တစ်ဘက်စီမှာ ရှိတဲ့ လက်ချောင်းတွေတောင်မှ အတိုအရှည် မတူညီကြတာ...။ မတစ်ထောင်ဖွား ပုဂ္ဂိုလ်များ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အမှုအကျင့်ချင်း တူနိုင်ဖို့ ဆိုတာ တော်တော် ခက်ပါလ်ိမ့်မယ်...။ မိုးပေါ်က အပ်နဲ့ လူ့ပြည်က အပ်တစ်စင်း ထိပ်တိုက်တွေ့လို့ လူတွေသာ တစ်ပြွတ်ပြွတ် မွေးလိမ့်မယ်...။ မွေးလာတဲ့ လူသားတိုင်း အမှုအကျင့်ချင်းတူနိုင်ဖို့ လမ်းဟာ လိပ်ခေါင်း ထမ်းပိုးပေါက် စွပ်မိဖို့ ခဲယဉ်းသလိုပဲပေါ့...။ ဟုတ်တယ်နော် ကိုတီဇက်အေ ...။ (အပျိုးလေးက လှသဗျား...။ ခင်းတတ်တယ်နော်...။)
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး...။ ဒီနေ့ အီးမေးလ်ထဲက ရလာတဲ့ ကာတွန်းလေး တစ်ပုဒ်ကို သဘောကျလို့ပါဗျာ...။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပါ...။ ပါးပါးလေးနဲ့ အတွေးတွေ ပစ်ပေးသွားတယ်ဗျ...။ မှန်တာ မမှန်တာ အပထား...။ ရုံးပိတ်ရက် နားနားနေနေလေးမှာ အပန်းပြေ၊ စိတ်ရွှင်လန်းသွားအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။ မိမိတို့ရဲ့ သွေးအမျိုးအစားနဲ့ တိုက်ကြည့်ပြီးတော့ ကောင်းရင်ယူ မကောင်းရင်ပယ်ပေါ့ဗျာ....။ ဥပါဒါန်ကြောင့် ဥပါဒ် မရောက်စေနဲ့လို့ ရှေးလူကြီးများက ဆိုခဲ့သကိုးဗျ...။
(စကားမစပ်ဗျာ... အဲဒီ ရှေးလူကြီးဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကျွန်တော် စွယ်စုံကျမ်းထဲ လိုက်ရှာတာ မတွေဖူးဘူးဗျ...။ ဟိုအင်္ဂလိပ်ကဗျာတွေမှာ ပါတတ်တဲ့ Anonymous ဆိုတဲ့ ကဗျာဆရာကို ရှာလို့ မတွေ့သလိုဗျ...။ တွေ့ရင် လက်တို့လိုက်ပါဦး...။ )
ကဲ.. လာပါပြီဗျာ.. သွေးဗေဒင်...။
တစ်ချို့က ပြောကြတယ်...။ သွေးအမျိုးအစား ကွဲရင် အမှုအကျင့်တွေလဲ ကွဲကြတယ်တဲ့...။ အဓိကအားဖြင့် လူတွေမှာ သွေးအမျိုးအစား အုပ်စု လေးခု ခွဲထားကြတယ်တဲ့...။ A, B, O နဲ့ AB သွေးအမျိုးအစားတွေပေါ့...။
အလုပ်တစ်ခု အပေါ် ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံ ကွာခြားခြင်း...။
ဘယ်လိုကွာခြားမလဲ..။ စမ်းကြည့်ရအောင်....။ ဆိုတော့ ဒီ အေ၊ ဘီ၊ အို နဲ့ အေဘီ တို့ကို တစ်ခန်းထဲ ထည့်ထားပြီး အလုပ်တစ်ခု ခိုင်းကြည့်လိုက်ရအောင် ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ...။
ကဲ...အခုတော့ သူတို့ လေးယောက်ကို ကဲန်တင်း တစ်ခုမှာ အတူတူ ထမင်းစားခိုင်းစို့...။
Timing, Punctuation, Promising အချိန်ကို ဂရုစိုက်ခြင်း
ဘယ်သူက အချိန်မှန်မလဲ...။ ချိန်းထားတဲ့နေရာကို ဘယ်သူတွေ ရောက်လာမလဲ...။
ပွင့်လင်းခြင်း၊ (သို့)အားနာတတ်ခြင်း (သို့) မသိတတ်ခြင်း၊(သို့) ဒဲ့ဒိုး ပြောတတ်ခြင်း၊ (သို့)တုတ်ထိုးအိုးပေါက် ပြောတတ်ခြင်း။
အသိနှင့် နေထိုင်ခြင်း (သို့) စိုးရိမ်စိတ် လွန်ကဲခြင်း (သို့) ကြောက်တတ်ခြင်း။
စူစမ်းခြင်း (သို့) စပ်စုခြင်း...။
အကြောင်းခြင်းရာ တစ်ခုကို အတင်းတုပ် ..အဲ.အဲ အတင်းပြောခြင်း၊အဲ..အဲ.. ဆွေးနွေးခြင်း (သို့) သတင်း ဖလှယ်ခြင်း...။
ကဲ... ကဲ...။ ဒီလောက်ဆို ကိုယ်ဘယ်လိုလူလဲ ဆိုတာ သိလောက်ကြပြီ ထင်ပါရဲ့...။ မကောင်းတာပယ်၊ ကောင်းတာဆယ်ပြီး လူအထင်ကြီးအောင် နေကြစို့လား...။ ဟီဟိ
(ပုံတွေ တင်ရတာ လက်ညောင်းလိုက်တာ...။ ၃-၄ ရက်လောက် ထပ်နားလိုက်ဦးမယ်...။ ဟဲ...)
အီးမေးလ် ပို့ပေးတဲ့ ညီမငယ် လေးနွယ် ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း Credit ပေးလိုပါတယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:57 PM 8 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: blood, Cartoon, Humour
ခုတစ်လော Blogging ဘက်ကို အချိန်မပေးနိုင်တာ ကြာသွားတယ်...။ ရေးမယ်လို့ ကြံတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကလဲ ခေါင်းထဲမှာ တစ်ပုံတစ်ပင်ကြီး...။ ဘယ်ကစပြီး ရေးရမယ်မှန်း မသိလို့...။ ရေးဖို့ကလဲ လက်က မတက်ချင်တော့ စိတ်လျှော့နေရတယ်...။ ဒါပေမဲ့ အလည်လာခဲ့သော မိတ်ဆွေများကို အားနာမိတဲ့ အတွက် မရေးမဖြစ် တစ်ပုဒ်တော့ အားတင်းပြီး ရေးလိုက်ရပါကြောင်း...။ ဆားလဲ မချက်တတ်/ မချက်ချင်ဆိုတော့ :D ...။
အခု တင်ပြမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ အိုင်တီသတင်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် နားစွင့်သူများအတွက် ကြားဖူး၊ သိဖူးပြီးသား အကြောင်းအရာ ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်...။ ဒါ့ကြောင့် သိပြီးသူများအတွက် အသစ်အဆန်း မဟုတ်တော့ပေမယ့် မသိသေးသူများအတွက် သိသွားအောင် ဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်...။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တုန်းက Apple ကနေ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ iPhone ကို 3G Version အဖြစ် အဆင့်မြှင့် ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်...။
ဖြန့်ချိမယ့်ရက်ကိုတော့ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ အစောဆုံးထားပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၂၂ နိုင်ငံမှာ စတင်ဖြန့်ချိမှာ ဖြစ်ပါတယ်...။
ပထမဆုံး ဖြန့်ချိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၂၂ နိုင်ငံမှာ စင်ကာပူနိုင်ငံတော့ မပါရှိခဲ့ပါဘူး...။ (အရာရာတိုင်းမှာ ထိပ်ဆုံး၊ ပထမဆုံး ဖြစ်ချင်တဲ့ ကိုကို စင်ကာပူ၊ မမ စင်ကာပူတို့ မခံချိမခံသာ ဖြစ်သွားတာပေါ့...။) ဒါတောင် ပြောလိုက်သေးတယ်...။ ပထမအသုတ်မှာ မပါပေမဲ့ သူတို့ဟာ အာရှ၊ပစိဖိတ်တစ်လွှားမှာတော့ iPhone သုံးစွဲသူ အများဆုံး ဖြစ်မှာပါတဲ့...။
ထားလိုက်ပါ...။ လိုရင်းကို မရောက်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်...။ ခုတစ်လော ဒီလို ဖြစ်နေတယ်...။ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို စလိုက်ရင် ဘယ်တော့မှ တန်းမရောက်ဘူး...။ ဟိုကွေ့ဒီဝိုက်နဲ့...။ အကျင့်ဖြစ်နေတာ...။ ကဲ..ကဲ ပြန်တည့်လိုက်ရအောင်...။
အခုလို ခေတ်စားနေတဲ့ အိုင်ဖုန်းကို အရူးအမူး စွဲလမ်းတဲ့ သူများ ရှိနေသလို တစ်ဖက်ကလည်း အိုင်ဖုန်းကို မနှစ်မြို့သူများလဲ ရှိပါတယ်...။ ဥပမာပြရရင် ကျွန်တော်ပေါ့...။ ကျွန်တော်လဲ အိုင်ဖုန်းကို မကြိုက်ပါဘူး...။ Apple က ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ခွင်ကို အပိုင်ကိုင်နေရုံးနဲ့ မကျေနပ်သေးပဲ သူံခွင်မဟုတ်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍကို လာရှုပ်ပါတယ်...။ Apple ဆိုတဲ့ တံဆိပ်ကြောင့်သာ လူတွေက ကောင်းတယ် ထင်နေတာပါ...။ တစ်ကယ့်တစ်ကယ်တော့ စထုတ်ကတည်းက အိုင်ဖုန်းမှာ ပြစ်ချက်တွေ ပါလာပြီးသားပါ...။ အမြင်သာဆုံး ဥပမာ ပြရရင်တော့ ၀င်လာတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ SMS တစ်ခုကို နောက်တစ်ယောက်ဆီ forward လုပ်ပြီး မပို့နိုင်တာပါပဲ...။ ပထမဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့ အိုင်ဖုန်းမှာ ဒီပြစ်ချက်ပါလာတာ ထားပါတော့...။ အခု နောက်ထပ် အဆင့်မြှင့် ထုတ်လိုက်တဲ့ 3G iPhone မှာလဲ ဒီပြစ်ချက်ကို ဖြေရှင်း မပေးသေးတာ တွေ့ရပါတယ်...။ အဆိုပါ ပြစ်ချက်ကို ဖုန်းကွယ်နိုင်ဖို့ အတွက် ဖြန့်ချိဈေးနှုံးကို လျှော့ပေးထားပါတယ်...။ နှစ်နှစ်ကန်ထရိုက်နဲ့ ၀ယ်ရင် ယူအက်စ် ၁၉၉ ဒေါ်လာနဲ့ 8GB 3GiPhone ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်တဲ့...။ (ကောင်မလေး နှုတ်ခမ်းပဲ့နေတယ်လို့ ပြောတော့ ကိစ္စမရှိဘူး သူကြီးသမီးမို့လို့ ယူတာလို့ ဆိုတဲ့ ရွာကသာအေးနဲ့တူပါ့...။)
Apple က ကနဦးမှာ 2G အမျိုးအစား iPone ဆိုပြီး ထုတ်လိုက်တော့ လူတွေက အရူးအမူး ဖြစ်ကုန်ရော...။ ဒီမှာတင် သမားရိုးကျ ဖုန်းထုတ်စားလာခဲ့တဲ့ ဖုန်းထုတ်လုပ်ရေး ကုမဏီများ မျက်ကလဲဆန်ပြာ ဖြစ်ပြီး ကမူရှုးထိုးနဲ့ ဖုန်းတိုက်ပွဲထဲကို Smart Phone များ အပြိုင်အဆိုင် ထုတ်လုပ်ပြီး ၀င်ရောက်လာကြတယ်...။
ဖုန်းဘိုးအေနိုကီယာတောင် မနေနိုင်တော့ပဲ N95 Series ဖုန်းနဲ့ အသဲအသန် လိုက်ဖိုက်လိုက်ရတယ်...။ ဒါပေမဲ့ ဖုန်းဘိုးအေလဲ နောက်ကောက်ကျသွားပါပြီ...။ N95 က Touch Screen မဟုတ်ပါဘူး...။ iPhone က Touch Screen ပါ...။ Screen က 3.5" ပါ...။ N95 က iPhone Killer မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး...။
LG က LGViewty ဆိုပြီး Touch Screen အကြီးကြီးနဲ့ လိုက်ယှဉ်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်...။ မတိုးပါဘူး...။ ဆမ်ဆောင်းကလဲ ထပ်ထုတ်ပါသေးတယ်...။ သူ့ကျတော့ ထုတ်လိုက်တဲ့ touch screen ဖုန်းများက အမျိုးအစား များလွန်းတော့ ဘာထုတ်လို့ ထုတ်မှန်းတောင် မသိလိုက်တော့ပါဘူး...။ iPhone ကို မှီဖို့ နေနေသာသာ ယှဉ်တောင် မယှဉ်နိုင်ပဲ ဈေးကွက်ထဲက ငုတ်လျိုးသွားပါတယ်...။
အိုင်ဖုန်းထွက်ပြီး တစ်နှစ်လောက်နေတော့ Sony Ericsson ကနေ Wi-Fi Functin ပါတဲ့ Touch Screen Smart Phone တစ်မျိုးကို ထုတ်လိုက်ပါတယ်...။ W960i Walkman Smart Phone အမျိုးအစားပါ...။ သူကတော့ လက်ရှိဈေးကွက်ထဲ ရောက်ရှိပြီး၊ လူကြိုက်များနေတဲ့ ထွက်ရှိခဲ့သမျှ ဖုန်းတွေထဲမှာ iPhone ကို လက်ရည်တူ ပြိုင်နိုင်တဲ့ ဖုန်းပေါ့...။ ဒီဖုန်းရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ထွက်ရှိသမျှ ဆိုနီဖုန်းတွေထဲမှာ Wi-Fi သုံးထားတဲ့ ဖုန်း၊ Built in Memory 8GB ရှိတဲ့ ဖုန်း၊ Touch Screen ပါတဲ့ဖုန်း စတဲ့ ထူးခြားချက်တွေပါ...။ ဖုန်းရဲ့ Operation System ကိုတော့ Symbiam စံနစ်ကို သုံးထားပြီး UIQ နည်းပညာနဲ့ အလှအပရေးရာ Graphic အပိုင်းကို တာဝန်ယူထားပါတယ်...။ ပရိုဆက်ဆာကိုလဲ ၁၂၈ MB အထိ သုံးပေးထားလို့ iPhone နည်းတူ ပေါ့ပါးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေးနိုင်ပါတယ်...။ အရွယ်အစားကတော့ အိုင်ဖုန်းလောက် မကြီးပါဘူး...။ စကရင်ကလဲ ၂.၆ လက်မသာ ရှိလို့ သေးတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်...။ သို့သော်ငြားလဲ ဆိုနီအဲရစ်ဆန်ရဲ့ သူများနဲ့ မတူတဲ့ Walkman ဆိုတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် အိုင်ဖုန်းနဲ့ ယှဉ်ပြီး ဖုန်းဈေးကွက်မှာ နေရာယူလာပါတယ်...။ Internal Built in memory ကလဲ သီချင်းအပုဒ်ပေါင်း ၈၀၀၀၀ ကျော်မက သိုမှီးနိုင်သလို ဗွီဒီယို ရုပ်ရှင်ကားများလဲ ဆန့်သလောက် သိမ်းထားနိုင်တဲ့ အတွက် အိုင်ဖုန်းကို မနှစ်သက်သူများအတွက် ရွေးစရာ ဖုန်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...။ (စကားမစပ် ကျွန်တော်အခု လတ်တလော သုံးနေတာ ဒီဖုန်းပေါ့...။ ဟဲ...။ အဲဒါကြောင့် သူ့ကောင်းကြောင်းတွေပဲ ရွေးညွှန်းနေတာ...။ )
Apple ကတော့ အစက သူ့ဖုန်းကို ယှဉ်နိုင်မဲ့ ဖုန်း မရှိဘူးဆိုပြီး ငြိမ်ရာကနေ အခုတော့ ဆိုနီရဲ့ W960i Feature တွေ မြင်ရရော... မျောက်မီးခဲ ကိုင်မိသလို ဖြစ်ပြီး 2G ဖုန်းအဖြစ်ပဲ ထုတ်လုပ်ရာကနေ 3Gဖုန်းအဖြစ်ကို အဆင့်မြှင့်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ သုတေသနများ အပူတပြင်း ရှာဖွေခဲ့ရာမှာ ပထမမျိုးဆက် 2G iPhone ကို ထုတ်လုပ်ပြီး တစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာပဲ 3G iPhone ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတော့တယ်...။ အမြန်နှုန်းအနေနဲ့ အရင်မျိုးဆက် iPhone ထက် ၂ ဆ ပိုမြန်ပြီး ဈေးနှုန်းကတော့ တစ်ဝက်တောင် ပိုသက်သာလာတယ်လို့ ကြော်ငြာထားပါတယ်..။ (အရင်ဖုန်း ၀ယ်သုံးမိတဲ့သူတွေကတော့ စတိဗ်ကို သတ်ချင်မှာပဲ...။ ဈေးကြီးပေးဝယ်ထားရပြီး နောက်ပေါ်တဲ့ ဈေးချိုတဲ့ 3G ဖုန်းက ပိုကောင်းနေတယ်...။) ဒီနောက်ဆုံးပေါ် 3G iPhone ရဲ့ ထူးခြားချက် ဒါမှမဟုတ် နောက်တိုးလာတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ GPS စံနစ်ပါလာတာပါပဲ...။ အခု နောက်ပိုင်း (၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇွန်လ နောက်ပိုင်း) ထုတ်လာတဲ့ စမတ်ဖုန်း အများစုဟာ အဲဒီ GPS စံနစ် ပါလာတာ များပါတယ်...။ GPS စနစ်ဆိုတာကတော့ ကိုယ်လက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့ နေရာကို ဂြိုဟ်တု အကူအညီနဲ့ တွက်ချက်ပေးပြီး မြေပုံပေါ်မှာ ပြပေးတဲ့ စနစ်လေးပါ...။ ဒီစနစ်ကို အမေရိကန် စစ်ဘက်ရေးရာက ထိပ်တန်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဖြစ်သာ အသုံးပြုခဲ့ရာမှ အရပ်သုံးအဖြစ် ခွင့်ပြုခဲ့တာ မကြာသေးပါဘူး...။ ဒီစနစ်ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ အခမဲ့ သုံးလို့ရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်...။ GPS အကြောင်းကို နောက်မှ ထပ်ရှင်းပြပါမယ်...။ အကျယ် သိချင်သူများ ဒီမှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်...။
GPS စနစ်ရဲ့ ထူးခြားချက်၊ အခမဲ့ သုံးခွင့်ရတဲ့ အချက်၊ နိုကီယာရဲ့ N Serirs ဖုန်းတိုင်းမှာ GPS စနစ်ကို အားလုံးနီးပါး ထည့်သွင်းလာတဲ့ အချက်ကြောင့် အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာ အဲဒီ GPS စနစ် မပါရင်ကို Smart Phone မဟုတ်တော့သလို အထင်ရောက်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားပါတယ်...။ ဒါပေမဲ့ Apple က ထပ်ကွန့်လိုက်တာကတော့ သူ့ရဲ့ GPS စနစ်ဟာ အများစုသော Smart Phone ထဲမှာ ပါသလို သမားရိုးကျ GPS စနစ် မဟုတ်ပါဘူးတဲ့...။ AGPS လို့ခေါ်တဲ့ Assit GPS စံနစ်ပါတဲ့...။ သမားရိုးကျ GPS များက မိမိရောက်ရှိရာ နေရာရဲ့ ထက်ကောင်းကင်ယံက ၆၀ ဒီဂရီ ခြားပြီး ရှိနေတဲ့ GPS Sattelite ၃လုံးကနေ အချက်အလက်ကို ရယူပြီး မိမိရဲ့ တည်နေရာကို လတ္တီကျူ့၊လောင်ဂျီကျူ့နဲ့ တွက်ချက် ဖေါ်ပြပေးပါတယ်...။ AGPS ကတော့ အဆိုပါ ဂြိုဟ်တုများရဲ့ အကူအညီအပြင် မိမိရောက်ရှိတဲ့ နေရာနဲ့ အနီးဆုံးက Cell Tower တိုင်များရဲ့ Signal ကိုပါ တွက်ချက်ပြီး ပိုပြီး တိကျတဲ့ နေရာကို ဖေါ်ပြပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့...။
ဆိုတော့ Apple က ဒီတစ်ခေါက် ထိုးနှက်လိုက်တဲ့ လက်သီးချက်ကတော့ ပြင်းလွန်းပါတယ်...။ ဆိုနီ w960i တောင် မလှန်နိုင်တော့ပါဘူး...။ ဆိုနီက ထပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဖုန်းတွေကလဲ w960i လို လုပ်ဆောင်ချက် စုံလင်တဲ့ ဖုန်းတွေ မဟုတ်တော့ပဲ တစ်ခုကောင်းဖုန်းများ ဥပမာ- Walkman Phone, CyberShot Phone စသည်ဖြင့်သာ ထွက်ရှိလာတာ တွေ့ရပါတယ်...။
ခုနောက်ဆုံး ကြားသိရတဲ့ သတင်းတွေအရ iPhone ကို အပြတ်အသတ် ယှဉ်မယ်ဆိုပြီး ထုတ်လာတဲ့ ဖုန်းတွေကတော့ Samsung Omania Instinct ဖုန်းတွေ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်...။
Instinct ကတော့ iPhone ထက် စောစီးစွာပဲ အမေရိကားမှာ လက်ဦးမှုရယူပြီး ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်...။ Nextel နဲ့ ချိတ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၀ နဲ့ နှစ်နှစ် ကန်ထရိုက်နဲ့ ထုတ်လိုက်တာပါ...။ သို့သော်လဲ ကြားသိရ၊ မြင်တွေ့ရသလောက်တော့ iPhone Killer ဆိုပေမဲ့ အိုင်ဖုန်းလောင်းရိပ်အောက် မလွတ်နိုင်ရှာပဲ အိုင်ဖုန်း အသွင်အပြင်၊ အိုင်ဖုန်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို တုပကော်ပီလုပ်ထားတာလို့ ထင်ရပါတယ်...။ လောလောဆယ်တော့ ဒီဖုန်းကို အမေရိကားမှာ ဖြန့်ချိနေပါတယ်...။
နောက်တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ Omnia ကတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ...။ ၃.၂ လက်မ စကရင်၊5Mega Pixel Camera (iPhone က2mega pixel ပဲ ရှိပါတယ်...။) စတဲ့ အချက်တွေကြောင့် Real iPhone Killer များ ဖြစ်လာနိုင်မလားလို့ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်...။ Omnia ဖုန်းကိုတော့ စင်ကာပူမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ကပဲ အမှာစာနဲ့ မှာယူစာရင်းသွင်းနိုင်ကြောင်း အိုင်တီ သတင်း တစ်ပုဒ်မှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်...။
ကဲ...။ အဆွေတော်များကရော ရွေးချယ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် iPhone ကိုရွေးမလား...။ iPhone မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားဖုန်းများကို ရွေးမလားဗျာ...။ (လက်ညောင်းသွားပြီဗျာ...။ နားလိုက်ဦးမယ် ၃-၄ ရက်လောက်..။ :D )
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:36 PM7ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Instinct, iPhone, iphone killer, N95, Omnia, Phone, Viewty, W960i
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:38 PM 1 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ကမ်းတစ်နေရာဆီက ခရမ်းရင့်ရင့်မျှော်လင့်ချက် တစ်စုံကို
ရိုက်ချိုးချင်နေတဲ့ မိစ္ဆာတစ်ကောင်ရဲ့ ငိုညည်းသံကို ကြားလား...။
ကျားနာခဲ ခဲထားတဲ့ သူ့လက်အစုံက
ဝေသီခေါင်ဖျား ကန္တာရဆီက နှင်းတစ်စက်က်ို မေ့ပစ်လိုက်ပါ...။
ကျဉ်းကျပ်နေတဲ့ အမှောင်ထုထဲမှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့
တစ်ယောက်တည်းသော သူရဲကောင်းကို မမေ့ကြပါနဲ့...။
သူမဟာ သွေးတွေနဲ့ နီစွေးနေတဲ့ နှင်းဆီ တစ်ပွင့် ဖြစ်တယ်...။
သူမဟာ နီစွေးနေတဲ့ ဦးခေါင်းအစုံကို မငုံ့တမ်း မော့နေသူ ဖြစ်တယ်...။
သူမဟာ ရောင်နီကို သယ်ပျိုးလာမယ့် လက်အစုံကို ပိုင်စိုးသူ ဖြစ်တယ်...။
သူမဟာ အားလုံးရဲ့ ကိုယ်စား ဖြစ်တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:47 PM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Dawn, Hope, Idol, Poem
Firefox Version 3.0 ကို လောလောဆယ် Download လုပ်ပြီး သုံးကြည့်နေပါတယ်...။
လောလောဆယ် သုံးထားမိသလောက် တွေ့ရမိတဲ့ အကျိုးအပြစ်များကို တစ်ချက်ချင်း တင်ပြသွားပါမယ်...။
၁။ အကျိုး The Good Part
၁။ Beautiful Interface - မြင်တွေ့နေကျ ဘရောက်ဇာ အသွင်အပြင်မှ အနည်းငယ် ခွဲထွက်လာသည်။ ပို၍ လှပလာသည်။
၂။ Brief History of the Web page - Address Bar တွင် မိမိသွားလိုသော လိပ်စာကို ရိုက်လိုက်သည်နှင့် အဆိုပါ လိပ်စာ၏ အကြောင်းအရာ အကျဉ်း၊ ၀ဘ်ပေ့ခ်ျနာမည်ကို ဖေါ်ပြသည်။
၃။ ဗားရှင်းအဟောင်းထက် ပို၍ ပေါ့ပါး မြန်ဆန်လာသည်။
၄။ မူလစာမျက်နှာရှိ လင့်ခ်ကို နှိပ်လိုက်သည်နှင့် စာမျက်နှာ အသစ်တွင် ဖွင့်ပေးသည်။
၂။ အားနည်းချက်။ The Bad Part
၁။ ၀ဘ်စာမျက်နှာရှိ လင့်ခ်အပေါ် Right click နှိပ်မိလျင် Browser အလိုအလျောက် ပိတ်သွားသည်။ Bug ဖြစ်နိုင်သည်...။
၂။ ကော်နက်ရှင်အားနည်းချိန်များတွင် blogspot webpage များ ဖွင့်လှစ်လျင် မရပါ...။ (ဒါတော့ ကော်နက်ရှင်နဲ့ ဆိုင်သွားပြီ ထင်တယ်...။)
ဖြည့်စွက်ချက်။ ။ ကျွန်တော်လည်းပဲ အောက်က လက်မှတ်ရထားတယ်ဗျား...။ :D
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:06 PM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Analysis, Download Day, Firefox V3.0
Start Download Firefox Now before 11:30 pm Myanmar Standard time
Firefox Version 3.0 ကို အခုအချိန်ကစလို့ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၁း၃၀ နာရီ မတိုင်မီ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် Firefox Team ရဲ့ Mission ဖြစ်တဲ့ The most download software in 24 hours mission ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့...။
ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းစံချိန်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ Guinness Record Book မှာ မှတ်တမ်းဝင်သွားအောင် Download လုပ်ပေးကြပါ...။ Software တစ်ခုလုံး အပြည့်အ၀ ၁၀၀% Download လုပ်မှ စံချိန်မှတ်တမ်းထဲ အကျုံးဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်...။
ဒီအောက်က လင့်ခ်မှာ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်...။
Free Download 3.0 for Windows English (US) (7.8MB)
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 7.8 MB ရှိပါတယ်...။ Happy Downloading!!!
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:05 AM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Browser, Download Day, Firefox V3.0
မနက်ဖြန်ကို Firefox Browser v3.0 အသစ် ထွက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်...။
အဲဒီအတွက် Firefox ရဲ့ mission ဖြစ်တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း Download စံချိန် အများဆုံး လုပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် အဖြစ် Guinness ကမ္ဘာ့စံချိန်မှတ်တမ်းများ စာအုပ်မှာ စံချိန်တင် မှတ်တမ်းဝင်သွားအောင် Download လုပ်ပေးကြဖို့ အသိပေးလိုက်ပါတယ်...။
ဖြည့်စွက်ချက်။ ။ Firefox Download Day ဟာ ပစိဖိတ် စံတော်ချိန် ဇွန်လ မနက် ၁၀း၀၀ နာရီ၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ ည ၁၁း၃၀ နာရီ၊ စင်ကာပူ စံတော်ချိန် ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့ မနက် ၁း၀၀ နာရီ အချိန်မှ စ၍ ၂၄ နာရီတိတိ ၀ှဲချီး ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:11 PM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Download Day, Download Fest, Firefox 3, World Record
ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပါတ်သက်လို့ ဥဒါန်းချီပါတော့မယ်ဗျား...။ မပြောမပြီး မတီးမမြည် ဆိုသလို စိတ်ကူးပေါက်ရင် ပေါက်သလို နာမည်ပေးတတ်တဲ့အတွက် အခုလဲ ခေါင်းစဉ်ကို ဘာကြောင့် ဒီလိုပေးရတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြပါမယ်...။
- ဒီစာတွေကိုတော့ ပေါက်ကရထဲမှာပဲ ထည့်တော့မယ်...။
- အရူးလွယ်အိတ်လိုမျိုး စုံစီနဖာနိုင်တဲ့ အချက်အလက်များကို ရေးသားမှာမို့ ဖြစ်ပါတယ်...။
- မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၊ ပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုကိုမှ ပျက်စီးနစ်နာစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မဟုတ်ပါ...။
- အတုယူသင့်တာတွေ ပါပါမယ်...။
- ကြော်ငြာ ဖြစ်ရင်ချင်လဲ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်...။ (သက်ဆိုင်ရာ ကာယကံရှင်များ သဒါပေါက်ပြီး ကြော်ငြာခ လာချီးမြှင့်မယ်ဆိုလဲ အားတုံ့အားနာနဲ့ လက်ခံပေးလိုက်ပါမယ်...။)
၁။ No Water...။
စိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်...။ အရှေ့မလေးရှားနယ် ဖြစ်တဲ့ ဆာဘား၊ ဆာရာဝတ် နားကို ခရီးထွက်ဖြစ်တုန်းက ဖြစ်ပါတယ်...။ သရဲခြောက်တယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ အင်ပီရီးရယ် ဟိုတယ်မှာ အိပ်ဖြစ်ပါတယ်...။ ခြောက်ထပ်က အခန်းတွေမှာ မတည်းပါနဲ့တဲ့...။ ကျွန်တော်ကတော့ သွားမိတဲ့ အခေါက်တိုင်းကို ခြောက်ထပ်မှာပဲ အခန်းရပါတယ်...။
ကြုံဖူးသူ တစ်ဆင့် စကားအရ အခန်းထဲကို ပထမဆုံး ၀င်လိုက်တာနဲ့ စိမ့်သက်သက်၊ အေးစက်စက် နဲ့ အရာက ကိုယ့်နံဘေးနား ဖြတ်သွားတာကို ကြုံရတယ်တဲ့...။ အိပ်ရာဝင်ခါနီးဖြစ်ဖြစ်၊ စာရေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကို အာရုံစူးစိုက်လုပ်မိရင် ဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို စောင့်ကြည့်နေသလို၊ စိုက်ကြည့်နေသလို ခံစားရတယ်တဲ့...။ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်တောင် ကြုံဖူးတယ်လို့ ပြောတာပဲ...။
ထားလိုက်ပါ...။ ခုပြောချင်တာက မလေးရှားက အထူးသဖြင့် အဲဒီ အရှေ့ပိုင်းနားနေတဲ့ နေးတစ်မလေးရှားများ အခင်းကြီးငယ်များ သွားပြီးရင် ကိုယ်လက်သန့်စင်ရာမှာ ရေ မသုံးကြဘူးလား မသိ...။ အခု ကျွန်တော် သွားသွားတည်းတတ်တဲ့ ဟိုတယ်က အိမ်သာရေချိုးခန်းမှာ ရေသန့်စင်ဖို့ ပိုက်ထားမပေးပါဘူး...။ တစ်ရှုးလိပ်ပဲ ထားပေးပါတယ်...။ အတော့်ကို ဂွကျနိုင်တဲ့ အနေအထားပါ...။ သူရို့ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်၌ကိုက ရေမသုံးကြတာလား မသိ...။ အညာမှာလို လယ်ပြင်သွား၊ တုတ်ခနောင်းနဲ့များ ပြီးလေရော့သလား...။ ဒါဆိုလဲ တုတ်ဖြစ်ဖြစ် ထားမှာပေါ့...။ ခုလဲ တုတ်နဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ အရာလဲ မတွေ့...။ တစ်ရှုးစက္ကူနဲ့ပဲ ကိစ္စပြီးရမယ့်ပုံပါ...။ ဒုက္ခ...။
အော်...။ အဲဒီ သရဲတွေ ဘာတွေလား...။ မကြုံခဲ့ပေါင်...။ လာခြောက်လို့ မကြောက်ဘူးဆိုရင် သရဲ သိက္ခာကျမှာစိုးလို့ ထင်ပါ့...။ လာတောင် မလာဘူး...။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ထက် ပိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လူချော မောင်ဘွိုင်းရုပ်ရည်ကို မြင်ပြီး လန့်သွားတာလားမှ မသိတာ...။ လူခြောက်တယ်... လူခြောက်တယ်ဆိုပြီး...။ ဟဲ...။
၂။ Cleaning Liquid at KLIA
အပေါ်က ပို့စ်ကတော့ သန့်စင်ခန်းမှာ ရေမထားပေးလို့ ဒုက္ခရောက်ပုံကို ရေးခဲ့ပါတယ်...။ အခုပို့စ်ကတော့ ကွာလာလမ်ပူလေဆိပ်က သန့်စင်ခန်းမှာ ကြုံရတာလေးကို ပြောချင်ပါတယ်...။ လေဆိပ်ဆိုတော့ သိတဲ့ အတိုင်း မတစ်ထောင်သားများ ဥဒဟို သွားလာဝင်ထွက်ရာ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်...။ သန့်စင်ခန်းများလဲ သိကြတဲ့ အတိုင်း လူပေါင်းစုံ အသုံးပြုကြပါတယ်...။
ဆိုတော့ သန့်ရှင်းမှုရှိတဲ့ သူတွေက ကိစ္စ၀ိစ္စပြီးရင် စနစ်တကျ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလေး လုပ်သွားပေးတတ်တယ်...။ သူတို့နဲ့ ပြောင်းပြန်လူတွေကတော့ ရေတွေ ဘာတွေ ဆွဲမချတဲ့ အပြင်... ဘိုထိုင် အိမ်သာကမုတ်ပေါ် ခြေထောက်နဲ့ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး အခင်းကြီး သွားလိုက်ကြသေးတယ်...။ (အဲဒီလို အထိုင်ကောင်းလို့ ကိုယ်ကျိုးနည်းသွားရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို နောက်များမှ တင်ပေးမယ်...။)
ပိုဆိုးတာက ကိုယ်ဘာစားထားတယ်ဆိုတာ နောက်လူသိအောင် သဲလွန်စများ ချန်ထားတတ်လေရဲ့...။ တစ်ခါသားဆို မြေပဲဆံတောင် ပါလိုက်သေး...။ အစာမကြေဘူးထင်ပါ့...။
တစ်ခါသားမှာတော့ ကျွန်တော် အကောင်းစားလေး မောင်ဘွိုင်းတစ်ယောက် တစ်နေ့လုံး အစားသောင်းကျန်းမှုဒဏ်ကို ကေအယ်လ်လေဆိပ်မှာ Transit စောင့်နေရင်းနဲ့ ခံရပါလေရော...။ တစ်ဂွီဂွီ တစ်ဂွမ်ဂွမ်နဲ့ ကိုသန့်စင်ကို လိုက်ရှာရတာပေါ့...။
လူပေါင်းစုံ အသုံးပြုနေတဲ့ လေဆိပ်အိမ်သာကို တက်ရမှာက ခပ်ရွံ့ရွံ့ဆိုတော့ စားသောက်ဆိုင်က တစ်ရှုးပေပါများ အလိပ်လိုက်ကို ယူသွားပါတယ်...။ သန့်စင်ခန်းထဲကိုလဲ စိတ်ညစ်ညူးခြင်းတစ်ဝက်နဲ့ ၀င်လိုက်တယ်...။ အိမ်သာကမုတ်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ ပါလာတဲ့ တစ်ရှုးနဲ့ သုတ်နေရင်းကနေ စဉ်းစားမိပါတယ်...။ ဒီလောက် နိုင်ငံတစ်ကာ အဆင့်မှီလေဆိပ်ကြီး တည်ဆောက်ပြီးတော့ မရှိမဖြစ် သန့်စင်ခန်းအတွက် သန့်ရှင်းရေးကိစ္စကို ထည့်မတွက်လေခြင်းလို့ အပြစ်တင်မိပါတယ်...။ ဒီလေဆိပ်က နိုင်ငံတစ်ကာ အကောင်းဆုံးလေဆိပ်ဆုကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ရရှိထားပါတယ်...။
နောက်တော့ လေဆိပ်တည်ဆောက်သူတွေအနေနဲ့ ဒီလို အဖြစ်တွေအတွက် တစ်ခုခုတော့ ကြိုတွေးပြီး လုပ်ထားရမယ်လို့ တွက်ဆပြီး အခန်းတွင်း ဘေးဘီဝဲယာကို မျက်စိကစားလိုက်တော့ ... လား.. လား...။ တစ်ရှုးများ ထားရှိရာဗူးဘေးမှာ သန့်စင်ဆေးရည်ထည့်ထားတဲ့ ဗူးကို တွေ့မိပါတယ်...။ အသုံးပြုပုံကိုလဲ သရုပ်ပြပုံနဲ့ ကပ်ထားပါတယ်...။ အောက်ကပုံမှာ ပြထားပါတယ်...။
၁။ တစ်ရှုးကို ယူပါ
၂။ သန့်စင်ဗူးအောက်နားက ပြွန်မှာ ကပ်ထားပေးပါ...။ ခလုတ်လေးကို နှိပ်ပြီး သန့်စင်ဆေးရည်ကို တစ်ရှုးပေါ် လိုသလောက် စိုစွတ်အောင် ဖြန်းလိုက်ပါ။
၃။ အဲဒီစိုနေတဲ့ တစ်ရှုးနဲ့ မိမိသန့်ရှင်းရေး လုပ်လိုတဲ့ နေရာကို သုတ်လိုက်ရုံပါပဲ...။
တော်သေးတာပေါ့ဗျာ...။ အဲဒီလို facility ထားပေးလို့ ...။ နို့မို့ဆိုရင်တော့ တစ်ရှုးပေပါတွေခင်းပြီး နှစ်ပါးသွားရမဲ့ပုံပဲ...။ အားလုံး ဒီအသုံးဝင် (လိမ့်မယ်လို့ ထင်)တဲ့ အချက်ကို သတိပြုမိပြီး အရေးကြုံရင် အသုံးပြုနိုင်အောင် ရေးသားရင်းနဲ့ အိမ်သာဋီကာ... အဲ .. အဲ.. ပေါက်ကရအိတ်တီ့ အပိုင်း (၁) ကို နိဂြုံးဂုတ် လိုက်ပါတယ်...။
စာကြွင်း။ ။ အဲဒီ သန့်စင်ဆေးရည်က Sprit လို မွေးတေးတေးနဲ့ အေးအေးလေးဗျ...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 8:51 PM9ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Airport, Miscellaneous, Toilet
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:35 AM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Let's upgrade FireFox to Version 3.0 and set the record together!!
ဒီblog ကို ရေးနေတာ Fire fox Browser နဲ့ ရေးတာပါ...။ IE နဲ့ ရေးတာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေပါ...။ ဖိုင်းယားဖောက်က် က multi tab တွေနဲ့ အစောပိုင်းကတည်းက ထုတ်တားတဲ့ ဗားရှင်းကတည်းက စသုံးခဲ့တာ ခု ဗားရှင်း ၂.၀ အထိပါပဲ...။ လာမဲ့ ဇွန်လ ၁၇ နေ့မှာ ဖိုင်းယားဖေါက်က်က သူ့ဗားရှင်း အသစ် Firefox Version 3.0 ကို စတင် ဖြန့်ချိတော့မှာပါ...။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ အဲဒီနေ့မှာ ဒီဗားရှင်း ၃.၀ ကို ၂၄ နာရီအတွင်း download အများဆုံး လုပ်တဲ့ စံချိန်ချိုးချင်တယ်လို့ Mission တစ်ခု ပြင်ထားပါတယ်...။
ဖိုင်းယားဖေါက် ချစ်သူများ ဗားရှင်းအသစ်ကို အဆင့်မြင့်ဖို့ အဲဒီိရက်မှာပဲ တစ်ပြိုင်တည်း ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ကြရအောင်လား...။ အကျယ်သိချင်ရင် ဒီ ဖိုင်းယားဖေါက် ဟုမ်းပေ့ခ်ျ မှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:27 PM 1 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Firefox, Firefox V3.0, Guiness Record
ငါ့ရင်ထဲ၌ မစဲသော မိုးတို့သည် ရှိုကုန်၏။
ထိုနည်းတူ အက်ကြောင်းထစ ပြုနေသော အတ္တတို့သည် ရှိကုန်၏။
ချစ်ခြင်းသဘောကို ခံစားတတ်သည့် နုနယ်သော နှလုံးသားသည်လည်း ရှိကုန်၏။
ဖြူစင်ရိုးသားခြင်းကို ငတ်မွတ်သော အာသီသတို့နှင့် ပြည့်တင်းကုန်၏။
အကြောင်းတရားကို မှီတည်၍ ဖြစ်ထွန်းလာသော အကျိုးတရားကြောင့်
ပစ္စုပန် အခြေအနေတို့ ဖြစ်ပေါ်၏။
ကောင်းကင်မှ ၀ဲနေသော သိမ်းငှက်တစ်ကောင်၏ မြင်ကွင်းကို
မြေပြင်မှ သမင်တစ်ကောင် ခံစားတတ်မည် မဟုတ်ချေ...။
ရေပျော်ငါး၏ လွတ်လပ်စွာ ကူးခတ်မှု အရသာကို မြေအောင်းကြွက်သည် နားလည်မည်မဟုတ်...။
ထိုနည်းတူ ငါ၏လာရာကို သင်မသိသကဲ့သို့ ငါ၏ လားရာကို သင်သိချေမည် မဟုတ်...။
သင်မြောက်ဘက်တူရူသို့ ဦးတည်ချိန်တွင် နေမင်းပေါ်ထွန်းရာအရပ်ကို ငါဦးတည်နေလိမ့်မည်...။
သင်စွန်ပလွံသီးကို စားသုံးနေချိန်တွင် ငါသည် စပျစ်သီးကို အကြိုက်တွေ့နေအံ့...။
အိပ်စက်ခြင်းကို သင် တပ်မက်ချိန်တွင် ကောင်းကင်မှ ကြယ်ကြွေခြင်းကို ငေးမောခြင်းအလုပ်ကို ငါလုပ်ဆောင်အံ့...။
အမြင်မတူမှုများကို ၀ိဝါဒကွဲခြင်းများနှင့် အဆုံးမသတ်ပါနှင့်...။
သင်နောက်ချန် ကျန်ရစ်နေခဲ့လျင် ငါတစ်ကိုယ်တည်း ရှေ့ဆက်သွားအံ့...။
၀ံပုလွေ၊ ခွေးအ များသည် ကောင်းသော အပေါင်းအဖေါ်များ မဟုတ်သည်ကို သတိချပ်လေ...။
ရေကြည်ရာသို့၊ မြက်နုရာသို့ သွားမည်လော....။ ယိုယွင်းနေသော စားကျက်ဟောင်းကို ဖက်တွယ်မည်လော...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 4:56 PM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။